May 21, 2019 Xafiiska Puntland Faallooyinka, Puntland, Somalia, Wararka Maanta, Wararka Puntland iyo Somaliland 12
Wararka ka imaanaya gobolka Sanaag ayaa waxay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay dagaal xoogan oo udhaxeeya Ciidamo ka kala tirsan Maamullada Puntland iyo Somalilandm waxaana dagaalka uu ka dhacay deegaanka Damalla-Xagare oo dhaca koonfurta gobolka.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii ay jidka ugaleen maleeshiyaad somaliland ah wafdi uu hogaamiyayay wasiirka waxbarashada Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan kaasi oo socdaal rasmi ah kumaraya deegaano katirsan gobolka Sanaag.
Wasiirka waxbarashada ayaa la sheegay in uu socdaal kutagay deegaanka Yubbe oo dhawaan ay xooga kuqabsadeen maleeshiyaad katirsan maamulka Somaliland waxaana booqashadiisa ka carooday masuuliyiinta Somaliland.
Wafdiga uu hogaaminayay wasiirka waxbarashada Puntland ayaa waxaa qayb ka ah wasiiro kale oo dowladda katirsan iyo Guudoomiyaha gobolka Sanaag Maxmuud Ismaaciil Ciyoon iyo sidoo kale qaar kamid ah saraakiisha ciidamada difaaca Puntland.
Sidoo kale booqashadooda ayaa waxay salka kuhaysaa ukuur gelidda xaaladda waxbarasho gobolka gaar ahaan imtixaanaadka shahaadiga ah ee dhawaan ka bilaawday Gobollada Puntland.
Wararkii ugu dambeeyay oo ay heleyso Marqaannews ayaa waxay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid dagan iyadoona ay caafimaad qabaan masuuliyiintii kasocday Puntland oo uu ugu horeeyo wasiirka waxbarashada.
Beer iyo bulsho kasta dhowr qudhmay laga ma waayo. Meeshan xaqiiqada ka jirta aan sharraxaad yar idin ka siiyo.
Sidooda ba maafiyada SNM oo hadda huwanta Awal iyo Jeclo ku soo koobmay ayaa beelaha kale ee geyiga ka ugaadhsada kuwooda oogu damiir iyo dadnimo liita ee aan bulshadooda ba u tirsanayn. Kuwaas iyo Oromo ay soo kireysteen ayay iminka dantu badday.
Nasiib daro, dhowr nolosha ka dhacsan oo reerka Ugayslabe ka dhashay weeye waxa dhallaan ku hayb ah oo billaa camal ah inta ay caqliga ka xadeen daroogo iyo marduuf ku maandooriyay oo sida xun u adeegsanaya. Waa na lagu guda jiraa in la soo af jaro.
Waaqicigu waxaa weeye in aanu geyigani ka jirin maamul rasmi uga tirsan federaalka Soomaaliyeed, dal “Somaliland” loo yaqaanno warkiisa iska ba daa ee. Waxa qasaya na waa fallaago ay ku dabayartahay ee Oromo ku shaqeysta.
Shiikhii iyo Xaaqii waa hore ayay kala baxeen oo waxaa magaca Isaaqa ku qadhaabanaya in yar oo Hargeysa iyo Burco ku kooban. Burco xataa hadda waa lagu kala baxay.
Oromada ayaa magacan gebigiisa ba u hadhi doona oo kala dhaxal wareegeysa sida ay wax u dhacayaan waayo iyagii baa hadda qummaati ugu abtirsanaya. Iidoorkii inta ay islahaayeen Soomaali ka dida ayay iyagii is cidhib gooyeen.
Wasiirka mala qabtay mise waa cararay waadiga cinwaanka ka dhigay waa bad qabaaye?!?
Halkaa waxaan ka dhadhansaday wasiirka gacanta ayaa lagu dhigay.
Badhan, Damala Xagare, Yubbe,Hadaaftimo, Xiingalool, Laasqoray, dhamaan ba waa in Ciidamada qaranku sifiican bulshada soo dhoweysay ula dhaqmaan oo wax qabad muuqda usameeyan.
Sidii markii ciidamadu TUKARAQ qabsadeena waa in mashaariicyo badan la dhagax dhigaa.
Kolayba masharaacida waxay soo bilaambayaan Bacda Ramadan Jnsha allah..siday sheegeen Salaadiintii WARSANGALI ee dhoowaan Badhan ka hadlay.
Weldone Jamhuuriyada Barakaysan Ee Somaliland.
Guul & Gobanimo.
GUUL DARO IYO GUNNIMO DHEH KOL HADDII AY OROMO KULA ABTIRSIINYO NOQOTAY.
Waaryaa Khaniisadii iidoorka ugu waynayd Suulilaanderad ba timid
Dhilooyinka Iidoorka ugu waaweyn Amina Wariis o futada laga waso o habargusjeclo ah iyo Adna aadan o shaqaalaha gurigeeda isu dhigta habeenka nin keedu safar aado
Qaran ilaalie says:
War Faqashta la dhiga wax caqta la mariyo, wax la qabto iyo wax sidoodii u caraara dabaddeena xuduuda Somaliland soo xidha..sheekada Sanaag Bari in la soo af meera..Viva Qarankeena Somaliland.
Waa sidaa sxb…LAHAYSTAYAASHU hayska caytamaan, loo joojin maayo, ciidankuna xadkoogii waa gadhayaan wax yar baa inooga hadhay oo less than 70km ah.
“Inyar Baa Ka Hadhayee HINJIYAAAAY”
“Hareeraa Ka Galooo HINJIYAAY”
Guul & Gobanimo Jamhuuriyada Somaliland.
Orono waa dawlad cidaa Uma baahna
Dhakhdaland dhalfada aan gashee dhuus kaga keenay
Goortaan dharbaaxyeeyey bay dhabanka duubtaaye
Dhangalaasadii lagu dhuftay soo dhar dhigataaye
Kolkaasay dhamaanteed xubnuhu wada dhaqaaqaane
Dabadeed dhalaankiyo duqow wada dharaaqaane
Iisug saaxiib ciyaari waa galin danbee.
Dameer Biixi meesha uu gali lahaa isagaa yaqaan, waxan oo kalena la isga hari mayo.
Ninkii la celin waayaa dan buu meel usoo fadhiisan doona goor dhow.
Snm maalmo kooban ayaa u haray
abdi Karim says:
reer isaaq inta aan carurtoda iyo iyaguba dagalka geleyn lkn dabka shidi yaqan baa halkan isugu timid waxan idin kula talin laha ka daya
carurta reer isaaq hadii ay run
tahay isaaqnimadu bal car arka kuwa halkan ku caytama oo malin qura furumaha tagalka tegey yeyba dagalami ne marka waxan leyahay kuwa gaajada looga faidaysanayo ee furumaha dagalaka la kenayow bal orda taga isbitalada waxa jooga wiilal reer hebel ah shalayna ciidan qaran aha xaq u dirirka jooga furumaha ama ha joogen buhodle ama tukaraq ama yube ama melaha la mid ka ah lama soo qaldine dhimasho sharaf leh bey ka dorten nolol dul ah lkn ma kala laha laba magac sida marna cidankii qaranka somalilnd wilashii reer hebel
marka ha gulaysto xaq u dirirku dila oo laya kuwa xoogaga musharka soo doontay waxan ogahay qoladan isaaqu
waxay musharka siiyan kuwa la soo khalday ee jiidaha jooga kuwa hargeysa iyo burco iyo berbera jooga wlhi waxay
ka dhinten baa gara waana cadahay sababtu laya kuwas si reer koodu u
tebo xaq u dirir gulaysta goor walba
Kkkkkkkk Mar Keli ah ayay Warooskii halkan ka baqaaqleyn jiray isku dhex yaaceen. Kkkk Dhuulooskii dagaalami jiray ayaa kun jeer dhaama kuwan. Yaa is gaadheyba. Kkkk
Dhuuloosku berigii hore af iyo adinba wuu ku diriri jiray. Kuwa halkan soo galaana wey is giijin jireen. Kkk kolkii danbe ee ay dani runta u sheegtay ee ay dagaal iyo buuq wax ku qaadi waayeen saaxiga ayay iska keeneen oo heshiis ayay nala gaadheen. Kuwii halkan ka buuqi jireynana wey ka gaagaabsadeen midhmidh niic ah mooyaane.
Laakiinse Warooskii intoodii badneyd nabadooda iney Budhleyn oo sidoodii fitno iyo dab la meereysaneysa oonan xitaa difaaci Karin iska daa iney dagaal badheedh ah soo qaadaane wey ka diideen iney ka kala daadiyaan. Inta yar ee soo hadheyna waxey ogaan doontaa iney dantoodu asliyanba ku jirto Somaliland oo iyagaa iska quusan.
Arinta qosolka badani’se waa xertii Waroos ee halkan ka quuqleyn jirey judhiiba qaar naga mida ood weliba daroogeyseen ayaad adeegsaneysaan iyo Oromo ayaad soo wadateen ayay soo qadimeenba. Jeegaantii xitaa wey soo dhaafeen. Kkkk Dhuloosku shan Sano dabadeed wuxuu ku andacooday ayay Waroosku judhiiba ku andacoonayaan.
Durdoba bilaa magac ayay kusoo cay tageen. Kkkkkkkkkkkk Isku kalsooni la’aantu inaad bilaa magac ama magac kale ku caytanto ayay ku badaa. Kkkkk
Waa sidaad tidhi Suldaan. Wixii caytamayaa xitaa Bucur Baceyr iyo Cigaal Shiidaadba ha’iskaga soo caytameen. Horaa loo soconayaa. Kkkk
DAAWO: Deni & Dhooba-Daarood oo si adag ugu hanjabay Muuse Biixi.
DAAWO: Ninkii waday gaarigii ku qarxay Km-4 oo la soo bandhigay & Sir culus oo laga helay+Qabiilkiisa
DHAGEYSO: Digniin culus oo la dul dhigay Shacabka Muqdisho ka dib Qaraxyadii shalay